WAXAAN BARANAYNAA HABABKA LOO YAQAAN "CHOKEBERRY GOOS GOOSKA AH" XILLIGA JIILAALKA: LA QALAJIYEY, LA QABOOJIYEY IYO FARSAMOOYINKA KALE EE CAANKA AH - NACNACA MADOW
Ugu Weyn Ee Nacnaca madow
Chokeberry (waxaa sidoo kale loo yaqaan 'chokeberry') waa warshad leh miro qurux badan oo qurxoon, oo lagu gartaa dhadhan wacan, tartan, dhadhan-macaan. Vitaminsku wuxuu ku badan yahay fitamiinada C, P, E, PP iyo B. Intaas waxaa sii dheer, caronin iyo dhowr waxyaabood oo raadraac ah ayaa sidoo kale qayb ka ah miro chokeberry, kuwa ugu muhiimsan ee birta, boron, xayawaanka iodine, copper, manganese iyo molybdenum. Waxaa mahad leh qayb ka mid ah taajirtaas, aroosha aronia waxaa si weyn loo isticmaalaa daawada dhaqameed, oo ka fakareysa in qofkasto madow oo aan qofna jecel ahayn, markaa jiritaanka tiro badan oo cuntooyin ah oo loogu talagalay diyaarintiisa iyo kaydinteeda waa mid la fahmi karo. Aan eegno kuwa ugu caansan.
Goorma ayay u fiicantahay in la soo qaato miro madow oo aan madow ahayn
Xitaa haddii aadan si sax ah u garaneynin marka ay tahay waqtigii la soo qaadan lahaa berry Aroni loogu talagalay goosashada xilliga qaboobaha, way fududahay in la fahmo su'aashan. Rowan, sida geedo kale oo badan, waxay bilaabaan inay ururiyaan xilliga dayrta (Sebtembar-Oktoobar), sababtoo ah waa waqtigan in aad awoodi doontid inaad soo ururiso berry si fiican u dillaacsan, taas oo dambe noqon doonta qaybo wanaagsan oo macaanka ah, noocyo kala duwan oo ka mid ah waxqabadka, liinta iyo waxyaabaha kale ee wanaagsan.
Xilliga jiilaalka, waxay noqon doonaan raad dhab ah, sababtoo ah wax kasta oo ka mid ah shaqada culeyska ah ayaa awoodi doona inay kala soocaan miiska waxayna keenaan fiitamiin badan oo faa'iido leh oo kordhiya difaac. Haddii aadan caadaysteen ilaalinta, ka dibna berry oo la ururiyo dayrta ayaa sidoo kale ku fiican in lagu qalajiyo ama lagu keydiyo. Marka la eego, diyaarinta chokeberry oo aan wax karin, haddii aad rabto inaad ka hesho berriga leh sifooyinka ugu sarreysa, waxaa macquul ah in la ururiyo midhaha ash buurta ka dib markii uu baraf ugu horeysay, marka ay gaaraan dhamaystirkooda buuxa oo buuxsamay inta ugu badan ee maaddooyinka waxtarka leh.
Diyaarinta berry blackberry ee qalajinta
Si kastaba ha ahaatee, waxaad horayba fahantay, ka hor intaadan u wareegin ilaalinta ama qalajinta, miraha la soo ururiyay wali waxay u baahan yihiin si fiican u diyaarso.
Sidaas darteed, ka hor inta aadan qalajin aronia la jarjaray ka dib markii uu barafoobo, waa in laga saaraa dalladda, oo si fiican u dhaqay biyo qabow iyo qashin, kala-soocida miraha bisil oo casiir leh oo ka soo shubma ama shay-ka-nadiif ah. Sida ugu dhaqsaha badan biyaha ayaa la miiray, miraha way yar yihiin qallalan, waxay ku jiraan lakab khafiif ah oo ku yaalla taraamid ama xayawaan tufaaxa ah waxayna bilaabaan qalajinta.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu fulinayo qorsheyaasheenna. Waxaad saxeexi kartaa foornada foornada ama qallajiye khaas ah, ama waxaad ku dhaafi kartaa qorraxda qorraxda meel fiican oo hawo leh. Doorasho kastaa waxay leedahay faa'iido iyo faa'idooyin gaar ah, oo aan ka wada hadli doono hoosta.
Baro naftaada faa'iido leh ee miro guduud ah: currants, blueberries, blackberries, blueberries, raspberries madow, waayeelka, qodaxda.
Siyaabaha lagu qalajiyo qanjirada roodhida
Sida aan hadda u xusnay, waxaa jira Saddex siyaabood oo waaweyn qallajinta berry of chokeberry: adoo isticmaalaya foorno caadiga ah ee guriga, iyadoo la isticmaalayo qallajiye koronto khaas ah iyo hawada furan, hoosta qorraxda tooska ah.
Dabcan, qalajinta degdega ah waxaad u baahan doontaa saamaynta kulaylka ee qalabka korontada, laakiin haddii aanad degdegin oo aad leedahay meel ku filan, markaa qalajinta dabiiciga ahi waxay noqon doontaa ikhtiyaar la aqbali karo.
Mashiinka furitaanka ee hawada furan waa habka ugu fudud ee ugu jaban si fiican u qalaji midhaha cawska. Waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad diyaariso ash buurta sida kor ku xusan, ku rush xaashida dubista ee hal lakab oo ku rid meel meel fiican ku jirto, ma iloobin inaad ku walaaqdo habka qalajinta.
Marka miraha ay istaagaan oo ay noqdaan kuwo jaban, waxaa suurtogal ah in ay ka saaraan kaydinta dheeraadka ah. Si kastaba ha noqotee, haddii xaaladaha cimilada ama waxyaallaha kale aysan kuu oggolaanin in aad qallajisid midhaha mawduucyada madow si fiican ugu habboon, markaa waxaad ku dhamaystiri kartaa habka lagu qalajiyo berry ah foornada heerkul aan ka badnayn +60 ° C Si kastaba ha noqotee, xaalad kasto, ash buur waa in aan lumiyo midabkeeda dabiiciga ah iyo urta.
Si aan loo ogaan fuuq-u-helidda fitamiinada xilliga qaboobaha, qallalan qallalan, hawo-qallalan, dogwood, plomme, gooseberries, jeeriga, blueberries, tufaaxa, qolof, abrikot, isteroberi.
Hooyooyinka intooda badan waxay doorbidaan inay sameeyaan qalajinta miro madow oo ah foornada madow ee foornada caadiga ah ee guryaha. Laga soo bilaabo aragtida la taaban karo, go'aanka noocan oo kale ah waa mid la fahmi karo, sababtoo ah wakhtiga lagu goosanayo midhaha ayaa loo isticmaalaa wax yar. Sidii hore u ahayd, miraha beeraha laga saaro dalladaha si fiican ayaa loo dhaqaa oo sug ilaa inta biyaha la gooyey, laakiin ka hor intaan midhaha la dhigin foornada, miro ayaa la dhigaa shukumaan qallalan oo nadiif ah, taas oo ka soo saarta dareeraha haraaga ah. Ka dib markii berry si fiican u qalalan, waxaa loo diri karaa foornada, preheated ilaa + 40 ° C. Heerkulkani, midhaha waa in la qalajiyaa qiyaastii nus saac, ka dib marka heerkulku sarreeyo + 60 ° C oo sii wado hannaanka ilaa berry si buuxda loo diyaariyo.
Si aad u go'aamiso in chokeberry uu qalajiyey ama aaney lahayn, fiiro gaar ah u yeelo joogitaanka dhibcaha biyaha ee midhaha: haddii ay yihiin, markaa qalajinta ma dhammaato.
Waa muhiim! Marka lagu qalajiyo berry Aronia foornada, waa in aysan aheyn casaan ama bunni midabkiisu, tan iyo kiiskan waa ammaan in la yidhaahdo in miraha ay qalalan yihiin.
Sida qallajinta dabiiciga ah, qaansarradu marmar waa isku dhafan yihiin, mana u oggolaan in ay ku dhajiso dhinac hal dhinac ah. Intaa waxaa dheer, waxaad soo ururin kartaa chokeberry burushyada, kuwaas oo ay ka gooyeen baadiyaha leh maqas iyo dharbaaxo on thread, ku dhegay qiiqa, balbaliga ama balakoonka.
Ku qalajinta qalajiyaha korantada
Qalabka guryaha ee casriga ah wuxuu nolosheena u sahlaa, iyo arrimaha miraha xilliga goosashada ama miraha xilliga goosan. Sidaas awgeed, joogitaanka qalajiyaha korontada, waxaad si dhaqso ah u qallajin kartaa chokeberry madow, halka xajinta qadarka ugu badan ee hantidooda faa'iido leh. Sidee si habboon u qabataa qalajinta qalabkan mucjiso ah? Berry waxa loo diyaariyey (nadiif ah, aan lahayn caleemo iyo shaybaarka waxyeellay) ayaa lagu dhaqaa biyo socda waxayna siiyaan waqti si ay u dhamaystiraan. Ka dib markaa, miraha waxaa la dhigaa shaandho haadi ah lakab khafiif ah (sida marka qalajinta foornada, oo aan ka badnayn dhowr mitir oo dhumuc ah) oo lagu rakibay qalajiye koronto, dejinta heerkulka + 60-70 ° C.
Waa muhiim! Had iyo jeer si adag u raac tilmaamaha qalabka. Caadi ahaan waxay muujineysaa wakhtiga loo baahan yahay iyo waxyaalihii kale ee ku saabsan hawlgalka qalajiyaha korantada..
Si fiican u qalajiyey chokeberry waa in gabi ahaanba laga takhaluso biyaha, halka ilaalinta midabka dabiiciga ah (miraha waa in aan helin hooska cas-brown). Waa in sidoo kale la ogaadaa in habkan oo lagu qallajinayo berry of chokeberry madow ay ka lumiyaan tartiib xun, iyo dhadhanka waxay noqotaa macaan oo leh dareenka la dareemi karo.
Sida loo xafidayo berry qallalan
Habka kaydinta ee chokeberry ee dhinacyo badan waxay ku xiran tahay kala duwan ee diyaarinta. Tusaale ahaan, waxay ku jiraan sanduuqyada Roob cusub Ku kaydi meel qallalan leh heerkul ah + 2-3 ° C iyo qoyaan ah 80-85%. Xaaladahaas oo kale, berry ayaa qallajinaya oo madow marba marka ka danbaysa, laakiin waxay ku sii jiri karaan lix bilood.
Si yar qaboojiyaha barafaysan barafaysan Badanaa dharbaaxo ku ridaan xarig oo ku dhegay meel qalalan oo qabow (tusaale ahaan, santuuqa ama barnka), iyo meelaha leh jiilaalka xasiloon, waxaa lagu kaydiyaa habkan illaa guga. Sida wanaagsan miro la qalajiyey Aronii, ka dibna meesha ugu fiican ee lagu kaydiyo waa weel caag ah ama weelasha dhalada ah oo si adag loo xiray daboolka naylon. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa baakad alwaax ah, laakiin xaaladda ugu weyni waa inay ka ilaaliso midhaha qoyaanka. Haddii shuruudan la buuxiyo, qaybta shaqada waxaa lagu kaydin karaa ilaa laba sano.
Miraha qalalan waxay heystaan ​​caraf udgoon iyo ciriiri dabiiciga ah, inkastoo ay u muuqdaan kuwo jaban, iyo marka la cadaadiyay qoryaha dabacsan.
Ma taqaanaa? Miraha qolofka la qalajiyey waxaa loo isticmaalaa daaweynta cudurka sclerosis, hypertension, diarriyo dhiig karka, sonkorowga, atherosclerosis, kiciska xinjirowga, glomerulonephritis, xasaasiyad iyo cudurrada kale ee badan. Inta badan miraha geedka waxay ka mid yihiin geedaha daaweynta.
Sida loo xakameynayo chokeberry madow
Mid ka mid ah siyaabaha ugu haboon ee loo beeray berry xilliga jiilaalka waa in la isticmaalo barafeeyaha. Sidaa daraadeed, haddii qaboojiyahaaga uu ku jiro qalab qaboojiye ah, waa inaad tixgelisaa ikhtiyaarka xakamaynta barafka. Miraha noocan oo kale ah waa kuwo had iyo jeer ah kuwo cusub, iyo habka diyaarintooda uma baahna wax kharash ah.
Dabcan, sida doorashooyinka kale ee la isku qurxiyo ee xilliga qaboobaha, xakamaynta chokeberry waxay leedahay waxbarid: Taabashada, dhaqday iyo beeraha la qalajiyey, waxay ku jiraan qaybo qaybood ah (xaalad qasab ah) oo si adag u xidhxidhnaa (waa la dhajin karaa). Ka dib markaa, chokeberry ayaa si siman loo dhigaa qaybta qaboojiyaha isla markaana ka tagay halkaas ilaa ay si buuxda u qaboojiso. Xaaladaha qaarkood, midhaha ayaa lagu xakameyn karaa inta badan, kadibna kaddibna ku rid weel si adag u xiran.
Waa inaadan marnaba ka jarin mugga miisaanka oo idil mar labaad, haddii aad u baahan tahay inaad qaadato oo kaliya wax lagu kariyo samaynta ama is-qabad. Marka la diiriyo oo dib loo dhigo, waxay luminayaan qadar balaadhan oo fiitamiin ah, inta badanna aad sameysid geeddi-socodkan, fiitamiinada yar ayaa sii ah.
Raadi cuntooyinka ugu fiican ee macaanka iyo macmacaanka laga helo miro iyo khudaarta cagaaran: yoshta, dogwood, mulberry, ciirnaanta, currant cad, viburnum, tufaax, khudaar, khudradda, boodhka, boodhka, physalis, yaanyada, roodhida.
Xalka kale ee wanaagsan ee diyaarinta berry aronia jiilaalka waa in la abuuro sabiib. Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan doontaa 1.5 kiiloogaraam oo ah fowdo diirran, 1 kiilo oo sonkor ah, 2 koob oo biyo ah iyo 1 tsp of citric acid.
First of dhan, waxaa lagama maarmaan ah in la kariyo sharoobada ka biyo iyo sonkorta, ka dib markii taas oo berry iyo citric acid lagu rusheeyey oo ku sii wad ilaa kari ilaa 20 daqiiqo. Waqtigaan ka dib, berry ayaa la soo saaraa, dib loogu tuuraa suunka iyo qaboojiyaha. Sida ugu dhakhsaha badan sharoobada sharoobada oo dhan, waa in midhaha laga saaraa waraaqda xayawaanka ku jirta oo ku faafaya xaashida dubista. Sida ku qallajinta caadiga ah, mustaqbalka blackberry mustaqbalka waa in si joogto ah u kicin, sii wadaan qalalan 3-4 maalmood. Marka ay gaarto gobolka la rabo, waxaa lagu shubayaa bac warqad ama dhalo, oo ku daboolaya faashad faashad.
Ma taqaanaa? Si kor loogu qaado dhadhanka sabiibta ee chokeberry, ka hor inta qalajinta, waa in aad ku rushaysaa berry ah oo sonkor budada ah.
Marka laga soo tago midhaha, waxaad sidoo kale yeelan doontaa sharoobada oo ay la kariyey. Ha ku shubin, sababtoo ah haddii aad u galiso suxuunta nadiifka ah, xilliga jiilaalka waxaad diyaarin doontaa cabitaanno dhadhan leh iyo jelly taas oo.
Chokeberry Lakab la Sugar
Haddii aad rabto in aad hesho agagaarka isgoysyada iyada oo aan lahayn daaweyn kulayl, ka dibna, laga yaabee, fursadda ugu guulaha badani waxay noqon doontaa berry, dhulka sonkorta leh.
Waxyaabaha noocan oo kale ah waxay hayn doonaan dhammaan xayndaabka faa'iidada leh iyo fiitamiinada dhirta, taas oo noqon doonta raad dhab ah xilliga cudurka epidemics ama bilowgii beriberi. Dhammaan waxa loo baahan yahay kiiskan waa hal kiilo oo miro ah iyo 500-800 garaam oo sonkor ah. Kala duwanaanshaha qadarka sonkorta waxay kuxirantahay doorashooyinka shakhsiga ah, taas oo ah, haddii aad doorbiddo miraha macaan, waxay u fiicantahay inaad qaadato 800 garaam, laakiin haddii aad jeceshahay iftiinka dabiiciga ah ee miro madow, markaas 500 garaam ayaa ku filnaan doona.
Ka hor intaan la goynin, kala saar nooca berry si fiican, iyaga oo ka soocaya saqafyada, oo biyo raaci mareenka biyaha.
Ka dib markii si fudud loo qalajiyo ash buurta, ka qaad blender oo qaawi, ku dar sonkorta. Halkii halkii blender ah, waxaad isticmaali kartaa a Booqday Furimaha Dagaalka caadiga ah, isagoo mar laba jeer ku maray dhexda. Markaad ka baxdo waxaad heli doontaa isku-dar ah berrinka qashinka ah, kaas oo ah in la siiyo waqti si loo buufiyo. Ka dib, adoo isku dardaraya barandhada la shiiday mar kale, waxaa lagu shubi karaa kulul, barmiil keli ah oo laisugu shubay, oo si adag u xiran xirmooyinka caag ah oo nadiif ah.
Duufaanta Reerka waxay ka baxaan in ay ku adkeeyaan in miro la sii daayo casiirkuna sii dheeraado (inta lagu jiro waqtigan sonkorta gebi ahaanba kala diri), ka dibna weelasha xiran ayaa laga saaraa meel qabow iyo madow (waxaad isticmaali kartaa qaboojiye joogta ah).
Sidaa daraadeed, waxaan ogaanay sida loo keydiyo buundada madow si aad u hesho faytamiin buuxda oo ah xilliga qaboobaha, aadna go'aansato habka aad u dooran kartid.
Haddii ay ku habboon tahay in aad isticmaasho miraha la qalajiyey, ka dibna waxaad isticmaali kartaa foornada, iyo haddii aad rabto in aad kuhesho foomka cusub inta ugu badan ee suurtogalka ah (oo ay ku jiraan dhadhanka iyo urta), ka dibna waxa fiican inaad bixiso habka lagu keydiyo ama si aad u xoqdo miro leh sonkorta.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Nacnaca madow 2019